Maxay dadka Muqdisho u diidaan toogashada xubnaha Al-Shabaab? | KEYDMEDIA ONLINE
Maxay dadka Muqdisho u diidaan toogashada xubnaha Al-Shabaab?
Murankii ugu xoogganaa ayaa ka taagan dhallinyaro uu maamulka Puntland dhawaan ku xukumay dil toogasho ah, waxaana sharci darro lagu tilmaamay go’aanka Gaalkacyo ka dhacay.
MUQDISHO, Soomaaliya - 48-kii saac ee la soo dhaafay waxaa sare u kacay, is weydiinta ku saabsan, sababta ka danbeysa in dadka Muqdisho, ka hor yimaadaan qisaasta xubnaha ka tirsan Kooxda Al-Shabaab ee lagu helo dabniyo dilal ah oo ay geysteen?
Dood xooggan ayaa ka dhalatay toogasho wadareed uu maamulka Puntland ku filiyay 21 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab, 27-kii bishii hore, waxaana Maamulka Deni hoggaamiyo lagu eedeeyay in ay dileen dad aan waxba galabsan.
Hayeeshee, xaaladda ayaa sii siyaadday, labadii maalin ee na weydaartay kadib markii isla maamulkaas uu dil ku xukumay siddeed dhallin yaro ah oo qaarkood ay ka soo jeedaan koofurta Gaalkacyo iyo magaalada Muqdisho.
Bannanbaxyo, looga soo horjeedo go’aanka Puntland ayaa si is daba jog ah uga dhaca Caasimadda, ehellada dhallinyarada xukunsanyaasha ah ayaana codsanaya in dhallinyaradooda loo soo wareejiyo Muqdisho.
Sida ay xog ku heshay Keydmedia Online, inta badan dhalinyarada uu hadda buuqu ka taagan yahay, Maamulka Galmudug ayaa u dhiibay Puntland, taas oo fadeexad u soo jeedday Maamulka uu Qoorqoor hoggaamiyo.
Inkastoo Puntland ku doodeyso in ay heyso caddeymo ku filan oo ah kuwii ay u cuskatay xukunka, hadana KON, ma xaqiijin karto sax ahaanshaha arrinkaas, waxase laga wada dharagsan yahay habdhaqanka dadka Muqdisho ee ku aaddan is hor is taagga iyo ka hor imaadka qisaasta xubnaha ka tirsan Al-Shabaab.
Waxaa la xasuustaa dhacdooyin dhowr ah oo dadka Muqdish kaga hor yimaadeen arrinkaas, sida dhacdadii caanka ahayd ee Taliyihii NISA, Sanbaloolshe, uu ku waayay xilkiisa, kadib markii uu Saadaq Joon xabsiga u taxaabay Xildhibaanno diiday in maxakamadda la geeyo xubno lagu soo qabtay iyaga oo dad dilaya saddex sano ka hor.
Sidoo kale waxaa laga warqabaa oo dhowr jeer oo kala duwan la soo bandhigay shaqsiyaad la damiintay kadibna dib loo soo qabtay iyagoo islaa howshii ku jira, sida Ilkacase oo la toogtay November 2020.
Inkastoo aysan jirin qanaaco shacabku ku qabo garsoorka Dowladda dhexe iyo maamullada xubnaha ka ah Fadaraalka, haddana dadweynaha ku dhaqan inta ka rogan Koofurta Gaalkacyo ilaa Muqdisho, oo dhibka ugu badan ku qaba Al-Shabaab, ayaa u muuqda in aysan ogoleyn la xisaabtanka Al-Shabaab.
Khabiir amni oo fadhigiisu yahay caasimadda ayaa aaminsan in mid ka mid ah waddooyinka laagu suulin karo Al-Shabaab ay tahay in la laba jibbaaro xukunnada ka billowday Waqooyiga Gaalkacyo, iyadoo loo marayo hubin rasmi ah oo soo banhin wadata.
Sidoo kale mid ka mid ah Saraakiisha Xeer-ilaalinta Maxakamadda Ciidamada Qalabka Sida, ayay KON, ka soo xiganeysaa, “Ehelladu ma ogala in ay laamaha amniga ku soo wargaliyaan in carruuntoodu ku biireen Al-Shabaab, mana ogola in la qabto ee la xukumo, ma waxa ay rabaan in dhallankoodu waligood dilaayaal nool ahaadaan”?